Sadhana Sharma's Blog: December 2008
May the year 2009 bring peace, prosperiety, abundance of happiness, wealth and success in your life.
Posted by Sadhana Sharma at 8:00 PM Links to this post
काम केही नौलो छैन, गफै मात्र नयाँ नयाँ
हाम्रो नेपाल पुरानै छ, तिम्रो जीवनशैली नयाँ
सबै ठूला पदहरुमा आफ्नै चम्चाहरु भर्यौ
उपहार भन्दै घुस, लिई तिमी दङ्ग पर्यौ
हाम्रो आङ नङ्ग्याएर, तिमी लाउँछौ सुट नयाँ
धिक्कार छ हामीलाई तिम्रो विश्वास गर्यौं किन
तिम्रा मिठा कुराहरुको जालमा हामी पर्यौं किन
हामीलाई नै लत्याएर, तिमी चाल खेल्छौ नयाँ
हामी सबै पुरानै छौं, हाम्रा नेता आए नयाँ
हाम्रो नेपाल पुरानै छ, उनको जीवनशैली नयाँ
उनको जीवनशैली नयाँ ।।।
Posted by Sadhana Sharma at 11:57 AM Links to this post
US/Nepal, 2008, 90 minutes, Color, DVD, Nepali/English, Subtitled
Filmed over three years during the most historic and pivotal time in Nepal’s modern history, The Sari Soldiers is an extraordinary story of six women’s courageous efforts to shape Nepal’s future in the midst of an escalating civil war against Maoist insurgents, and the King’s crackdown on civil liberties. When Devi, mother ofa15-year-old girl, witnesses her niece being tortured and murdered by the Royal Nepal Army, she speaks publicly about the atrocity. The army abducts her daughter in retaliation, and Devi embarks onathree-year struggle to uncover her daughter’s fate and see justice done. The Sari Soldiers follows her and five other brave women, including Maoist Commander Kranti; Royal Nepal Army Officer Rajani; Krishna,amonarchist fromarural community who leadsarebellion against the Maoists; Mandira,ahuman rights lawyer; and Ram Kumari,ayoung student activist shaping the protests to reclaim democracy. The Sari Soldiers intimately delves into the extraordinary journey of these women on opposing sides of the conflict, through the democratic revolution that reshapes the country’s future.
Posted by Sadhana Sharma at 9:17 AM Links to this post
तिम्रो मेरो , मेरो तिम्रो, हाम्रो माया कस्तो
आकासको जून अनि जूनेलीको जस्तो
छुट्टिदैनौं अब हामी सास रहे सम्म
सँगै जिउँछौं हामी, जिउने आश रहेसम्म
तिमी र म, म र तिमी, भेट्नै जन्मिएका
हाम्रो माया बाला अनि बयेलीको जस्तो
तिम्रो मुटु मेरो काया भित्र धड्किदिन्छ
मलाई दुख पर्दा तिम्रो सासै अड्किदिन्छ
गंगाजल भन्दा बढी शान्त, शुद्ध, स्वच्छ
हाम्रो माया दीप अनि उजेलीको जस्तो
आकासको जून अनि जूनेलीको जस्तो ॥
Posted by Sadhana Sharma at 12:46 PM
यहाँ मेरो कोठाबाहिर एउटा चौर छ । व्यस्त ठाउँ व्यस्त मान्छे, चौरमा घाम तापेर, बदाम सुन्तला खाँदै बस्ने बानीअमेरिकीहरुलाई परोस् पनि कसरी, त्यसैले होला, चौर प्राय: सुनसान नै हुन्छ । एक महिना जस्तो अगाडिको कुराहो, बाहिर ठुलो अनि मीठो स्वरमा कसैले गीत गाएको सुने मैले, यसो बाहिर हेरेको, एउटा चाइनिज जस्तो देखिनेमान्छे ( चाइनिज नहुन पनि सक्थ्यो, शायद मेरै कमजोरी हो, म चाइनिज, कोरियन, जापानिज, फिलिपिनोआदिलाई उस्तै देख्छु) गीत गाउँदै हिंडेकोथियो, आफ्नै भाषामा । भन्छन् नि गीत-संगीतको कुनै भाषा हुँदैन भनेर, शायद त्यसैले होला, भाषा नबुझे नै पनि मलाई त्यो गीत मनपर्यो ।
दुइ तीन दिन पछि फेरि, म भित्र पढिरहेकीथिएँ, कसैको गीत सुनियो, झ्यालबाट बाहिर हेरें, त्यही मान्छे, फेरि पनित्यही गीत गाउँदै हिडेकोथियो । “यो मान्छे पागल हो कि क्या हो? हेर्दा त त्यस्तो लाग्दैन, किन सँधै एउटै गीतगाउँदै हिँडेको होला?” मनले प्रश्न गर्यो । “ फरक गीत होला, भाषा बुझेपो फरक छुट्टिन्छ त!” मनलाई सम्झाएँ मैले।
त्यस्को भोलिपल्ट, स्कुलबाट फर्केर कोठातिर आउँदैथिएँ, त्यही मान्छे भेटियो, चिन्नु न जान्नुको मान्छेसँग पनिहाइ हेल्लो गर्नु पर्ने यहाँको चलन न हो, मुसुक्क हाँसेर उसले भन्यो – म ठिक छु, तिम्रो के छ ?” मैले सोधें । मपनि ठिक छु, तिमी पनि USF जान्छौ ?” उसले सोध्यो, “हो” मैले भनें । “ मैले केही पटक तिमीले गीत गाएकोसुनेकी छु, कुन भाषामा हो?” मैले फेरि सोधें ।
“मेरो आफ्नै चाइनिज भाषामा” उसले भन्यो ।
“ए! त्यसो भए त यहाँ जस्तै आफ्नो आफ्नो देशमा पनि हामी छिमेकी नै रहेछौं “ मैले थपें ।
“तिमी कुन देशबाट हो र?” उसले सोध्यो ।
“नेपालबाट” मैले भनें । नेपाल शब्द भन्दा मेरो स्वर स्नेहले अलिकति पग्ले जस्तो, गर्वले अलिकति फुले जस्तोअनि श्रद्धाले अलिकति नतमस्तक भए जस्तो, भए झैं लागेको थियो मलाई, त्यसबेला पनि ।
उसले भने जिन्दगीमैं पहिलो चोटि सुनेको शब्द जस्तो गरेर “नेपाल?” भन्यो । म केही भन्न खोज्दै थिएँ, उसलेफेरि आफैं भन्यो – “ ओह, नेपाल, त्यो सानो देश, जुन Mount Everest को अर्को पट्टि छ ?”
सगरमाथा मेरो देशमा छ भनेर गर्व गर्ने मलाई थाहै थिएन, चाइनिजहरुले नेपाललाई कसरी चिन्दा रहेचन् भन्ने ।होइन भन्न सक्दिन थिएँ म, आखिर सगरमाथाको एउटा पाटो उनीहरुको देशमा पनि छ नि, त्यसैले “हो” भनें ।
मलाई त्यसबेला पनि उसको गीतको बारेमा कति प्रश्न सोध्न मन थियो, कुरा देश पट्टि गयो, अनि उतै अलमलियो। “ तिमीलाई भेटेर खुशी लाग्यो, पछि भेटौंला है” यति भनेर उ आफ्नो बाटो लाग्यो ।
भोलि पल्ट, स्कुलको शटल पर्खेर बसेकीथिएँ म बस स्टपमा, उ त्यही आइपुग्यो । “ हाइ, हिजो त परिचय गर्नैबिर्सेको, मेरो नाम ली हो तिम्रो ?” उसले भन्यो ।
“मेरो साधना, तिमीलाई त उच्चारण गर्न गाह्रो होला मेरो नाम ” मैले हाँस्दै भनें । नभन्दै उसले दुइ तीन पटकभन्नलायो मलाई मेरो नाम, अनि बल्ल भन्न जान्यो ।
“एउटा कुरा सोधौं ली ? “ गीतको बारे मा सोध्ने यही मौका थियो मेरा लागि ।
“सोधन” उसले भन्यो । नसोध त कसले पो भन्छ र!
“ भाषा नबुझे पनि मलाई तिमीले गाएको गीत एक दम मनपर्यो, मैले दुइ दिन सुनें, दुवै दिन एउटै गीत गाए जस्तोलाग्यो, तिम्रो त्यो गीत ले के भन्छ ?”
“हो एउटै गीत गाएको हो मैले, त्यो गीत मैले आफैं लेखेको हुँ, त्यसले मेरो व्यथा भन्छ, मान्छे ले मान्छेको व्यथाबुझेर होला, तिमीलाई त्यो गीत मनपरेको “ गम्भिर हुँदै भन्यो उसले ।
“ कस्तो व्यथा ? ” मैले सोधें ।
“ यो गीत मेरी भुतपुर्व प्रेमिकालागि हो, उसले मलाई छोडेर गई, तर म उसलाई बिर्सन सक्दिन, उसैको यादमा सँधैयो गीत गाउँछु म, शायद यो मैले लेखेको मेरो जीवनको अन्तिम गीत हो । यसले – “ ए निष्ठुरी, तिमी किन मलाईछाडेर गयौ ? मैले तिमीलाई हदै सम्म माया गरेकै थिएँ नि ... भन्छ” अझ बढी गम्भिर बन्यो उ ।
“ओह, दु:ख लाग्यो मलाई, तर अन्तिम गीत किन र?” मैले फेरि सोधें ।
“किनभने उसलाई मैले गीत लेखेको मनपर्दैन, म सपना, कल्पनाको संसारमा मात्र हराउने मान्छे रे, वास्तविकसंसार के हो मैले बुझेकै छैन रे, अनि मलाई यो संसारमा कसरी रमाउनु पर्छ भन्ने पनि थाह छैन रे, उसकोबिचारमा । उ भौतिक दुनियाँमा रमाउँछे, पार्टी, क्लबहरुमा जान खोज्छे, म भने अलि एकलकाँटे छु, त्यसैले उसकोबिचारमा, उसको र मेरो टाइप मिल्दैन रे । टाइपका लागि उसले मेरो माया लत्याएर गइ, हामी सँगै पढ्छौं अहिलेपनि, त्यसैले मैले गीत लेख्न बन्द गरें भने, मेरो सपना, कल्पनाको दुनियाँबाट बाहिर आएं भने अलि Realistic भएँभने, शायद उ फर्केर आउँछे कि !” उसले बोल्दा बोल्दै सटल आइपुगेको थियो, चढ्दै भन्यो उसले ।
म पनि सटल चढें, त्यहाँ लीका केहि साथीहरु थिए, आफ्नै भाषामा बोल्न थाले उनीहरु, त्यसैले मैले केही भनिन ।मन दुखी बनेको थ्यो उसको कथा सुनेर । “आखिर कसरी त्यति कठोर बन्न सक्छ मान्छे ? “ प्रश्न सोध्दै थियो मेरोमन । तर मसँग उत्तर थिएन दिनलाई ।
शायद अपार दु:ख र वियोगको गीत भएकोले होला, भाषा नबुझेपनि त्यो गीत मलाई भावुक लागेको, मन छुनेलागेको । जस्तै जे भए पनि, सपना कल्पनाको सुन्दर संसार छोडेर उ, वास्तविकताको कुरुप दुनियांमा नगएहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई हिजोआज । कोठा भित्र एक्लै बसेर गीत लेखे जतिको, आफ्नै सिर्जनामा आफैं झुम्दाजतिको मजा डान्स पार्टिहरुमा झुम्दा कहाँ आउँछ होला र ?
Posted by Sadhana Sharma at 2:27 PM Links to this post
उनी सुन्दर छिन । सुन्दरताको पनि परिभाषा गर्ने आ आफ्नै तरिका हुन्छ । मेरो परिभाषामा उनि सुन्दर छिन । म उनको तस्विर आफ्नो मनमा सजाएर राख्न सक्छु । तपाईंहरु भन्नु होला एस्ले आफ्नो प्रेमिकाको कुरा गर्दै छ । हो, सत्य म आफ्नै प्रेमिकाको कुरा गर्दै छु । मलाई माया गर्ने र मलाई माया गर्ने को कुरा नगरे म कसको कुरा गरौ त ?
दीपसिखा अर्थत मेरी प्रेमिका एक्लो थिइन यो सन्सारमा ।बाबा, आमाको माया कस्तो हुन्छ त्यो पत्तै थिएन उनिलाई । मेरो उनि प्रतिको माया देखेर भन्थिन "तिम्रो मायामा मेरो बाबा आमाको माया पनि मिसिएको होला हगी ?" म हास्थे मात्र । अनि कहिले काही भनिदिन्थे "हो, म तिम्रो सबै हु । मेरो माया लाई तिमी बाडेर लिउ है ?"
उनीलाई प्रकृती प्रती पनि उत्तिकै रुची थियो । म उनीलाई लिएर विभिन्न पार्कहरु मा जान्थे, भुगोल पार्क , त्रिभुवन पार्क्, रत्न पार्क आदी आदी । उनि सग बसेर कुरा गर्द समय बितेको पत्तै हुँदैनथयो । घरबाट फोन आउँदा थाहहुन्थ्यो, अब त घर जाने बेला भैसकेछ । उनीलाई माया गर्दा पनि मैले उनिलाई आफ्नो घरमा चिनाउन सकेको थिइन । उनको त आफ्नो कोही थिएन, जे भने पनि उनि एक्लो थिइन ।
उनको घर म सधै जान्थे । घर त थिएन उनको , डेरामा वस्थिन । घर बेटी राम्रा थिए । उनको बारेमा चासो राख्थे । मैले पनि धेरै पटक भेटिसकेको थिए । घरमा खाना आफै बनाउथिन उनी ।"आफुलाई मात्र खान बनाउन अल्छी लाग्दैन ?" भनेर सोद्धा उनी भन्थिन " अब त बानी परीसक्यो" । हुन पनि हो, जीवनमा जे पर्छ त्यो टर्छ नै ।
उनको कोठामा सुगा पनि थियो । असाधै माय गर्थिन । आफ्नो कमाइ बाट केहि रकम छुट्टाएर आहारा किनिदिन्थिन उनी सुगालाई । घर आउने बित्तिकै पिजडा बाट झिकेर आफ्नो बिस्तारामा राख्थिन उनी । कुनै बेला बिस्तारा फोहोर पनि गरी दिन्थ्यो, तर उनी कती पनि झर्को मान्थिनन ।उनी घर भित्र छिर्ने बित्तिकै दीपसिखा दीपसिखा भनेर बोलाउथ्यो ।सायद उनले जती माया मलाई गर्थिन त्यती सुगालाई पनि । सुगाको नाम राखेकी थिइन ,राजकुमारी ।
उनीले मलाई जन्म दिनमा दिएको कलम ले कथा लेख्छु भनेर दराजमा सजाएर राखेको थिए । उनीकै आग्रहमा मैले कथा लेख्ने सोच बनाएको हो । उनले भन्दै थिईन "तिमी लेख,अरुले नपढे पनि म तिम्रो किताब पढ्ने छु । उनीले मेरो लेखन प्रती देखाएको सहनभुतिले लेख्नै पर्छ जस्तो बिचार आयो अनि मैले केहि लेख्ने प्रण गरे । "तिमी मलाई किन कहिले पनि गाली गर्दैनौ ?" मेरो सहन्शिलता प्रती नतमस्तक हुँदै मलाई उनले प्रश्न गर्थिन । म उनीलाई भनिदिन्थे "तिमी सग रिसाए भने को सग हास्नु ?" ।
मीठा क्षणहरु थुप्रै थिए तर ति सबै स्मृतिमा रहे । "तपाईहरुलाई उनको स्मृती सभामा पल्नु भएको मा धन्यबाद " भन्दै आलोक गह भरी आशु पार्दै त्यो मन्च बाट बिदा भयो । दीप्सिखाको स्मृती सभामा आलोकले मलाई पनि बोलएको थियो । म एउटा कुनामा बसेर सुनी रहेको थिए ।
Posted by Suman at 3:29 PM Links to this post